Friday November 06, 2020 - 16:40:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya deegaanka Gandarshe ayaa sheegaya in weerar naf hurnimo lagu qaaday ciidamo huwan ah oo deegaankaas ku qaaday duullaan gardarra ah.
Gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay oo uu kaxaynayay dagaalyahan naftiis hure ah ayaa weeraray ciidamo isugu jiray American iyo maleeshiyaadka loo yaqaan Alpha Group.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidanka Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu sheegay in weerarka ay ku dhinteen 5 askari oo uu ku jiro askari American ah "Camaliyad istish-haadi ah oo mujaahidiintu ay ciidamo saliibiyiin iyo murtadiin ah kula beegsadeen deegaanka Gandarshe ayay ku dileen Askari American ah iyo 4 katirsan maleeshiyaadka Alpha Group" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay XSHM.
Wararku waxay sheegayaan in qarax ay ku dhaawacmeen sedax askari Soomaali ah iyo askari American ah kuwaas oo dhaawacyadooda loo qaaday dhanka Xerada Xalane.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamadii huwanta ahaa ay dib ugasoo noqdeen deegaanka Gandarse iyagoo wata meydad iyo dhaawacyo, goobtii uu weerarku ka dhacay ayaa lagu arkay agabyo melleteri oo ay ka carareen ciidamada huwanta ah.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in xalay saqdii dhexe ay maqlayeen guuxa diyaaradaha Mareykanka oo dusha sare ka ilaalinayay ciidamadii lugta ahaa ee weerarka qaaday iyo jugta qarax weyn oo lagu beegsanayay.
Ciidamada American-ka ayaa si toos ah iyo si aan toos aheynv ugu lug leh duullaanka Saliibiga ah ee lagusoo qaaday dalka Soomaaliya wuxuuna ku lug lahaashiyahaas sii xoogeystay sanaddii 2017 kolkaas oo dowladda Mareykanka uu majaraha uqabtay Donald Trump.
Hoos ka daawo sawirro muujinaya raadadka khasaarihii camaliyadda ka dhashay